भक्तपुर घटनामा प्रहरीले निकाल्यो यस्तो प्रारम्भिक निष्कर्ष, के होला ? हेर्नुस – Rapti Khabar
काठमाडौं, भदौ २७ मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ निकोसेरामा घर झ’गडाले परिवार नै सखाप भएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। घटनास्थलमा फेला परेका प्रमाण र घटनाको प्रकृति हेर्दा श्रीमती र छोराको ह’त्या गरेर सुदीपले आ’त्मह’त्या गरेको प्रहरीको ठम्याइ छ।
शुक्रबार साँझ ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, ३४ वर्षीय श्रीमती सम्झना र १६ वर्षीय छोरा सुशान्तको घरभित्रै फरक–फरक कोठामा श’व फेला परेको थियो।
श्रीमती र छोराको टाउकोमा गहिरो चोट भए पनि घरमा बाहिरी मान्छेको प्रवेश नदेखिएकाले सुदीपले नै ह’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। हत्यामा घरकै दाउ (धारि’लो हति’यार) प्रयोग देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुशान्तको श’वसँगै दाउ फेला परेको थियो।
‘श्रीमती र छोराको ह’त्या पहिल्यै भएको र पछि आफूले आ’त्मह’त्या गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले भने, ‘आमा-छोराको श’व गनाएको छ तर उनको त्यस्तो छैन।’
यस्तो छ घटनास्थल
पहिलो तलाको ढोका नजिकै कुकुर मरिररहेको अवस्थामा छ। त्यसको भित्र छोराको कोठा रहेको र उनको श’व आफ्नै बेडमा छ। ह’त्याको समयमा उनले केही संघर्ष गरेजस्तो देखिन्छ। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट छ। श’वले थिचेको अवस्थामा दाउ फेला परेको छ। घोप्टो परेको उनको श’वलाई पहेंलो कपडा ओढाइएको छ।
त्योभन्दा माथिल्लो तलामा आफ्नै बेडमा श्रीमतीको श’व दायाँपट्टि पल्टिएको अवस्थामा छ। उनको पनि टाउकोमै गहिरो चोट छ। उनको श’वलाई सेतो कपडा ओढाइएको छ। श’व गनाएको छ।
त्योभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको किचनमा सुदीप लडिरहेका छन्। ट्वाइलेटमा बमिट गरिएको छ। त्यो बमिट प्रहरीले परीक्षणका लागि पठाएको छ। तर, उनको शरीरमा कहीँकतै चोट देखिँदैन। अरुको भन्दा उनको ला’स आलै देखिन्छ।
नजिकै कुकुरलाई पानी दिने गरेको भाँडो छ। भाँडामा भएको पानीमा झिँगा मरिरहेका छन्। सुदीपको पनि हातमा पहेंलो केही लागेको देखिन्छ।
एउटा कचौरामा चम्चासहित केही बस्तु सुकेको अवस्थामा छ। त्यो सल्फर (वि’ष) भएको प्रहरी अनुसन्धान टोलीको अनुमान छ। यी सबै प्रहरीले परीक्षणमा पठाउने तयारी गरेको छ। किचनमा भेटिएको दालभातमा नै विष घोलेर खुवाएको हुनसक्ने देखिएपछि त्यहाँ रहेका बाँकी अंश परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ।
शनिबार बिहान घर पछाडि रहेको धानबारीमा प्रहरीले दुई वटा सल्फरको बट्टा फेला पारेको छ। घरको दक्षिणतर्फ फेला परेका ती रित्तो बट्टा पनि परीक्षण गरिने महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले बताए। ‘यी सबै परीक्षणपछि मात्रै प्रस्ट भन्न सकिन्छ, अन्य कारणबारे पनि हामीले बुझिरहेका छौं’, एसएसपी थापाले नेपालखबरसँग भने।
घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा घटना पूृर्व योजनामा नै भएजस्तो देखिने एक प्रहरीले बताए। ‘पूर्व योजनाजस्तै देखिन्छ, श’वलाई कात्रो ओढाइएको छ, आमा-छोरा मारेकै दिन कुकुर पनि मारिएको छ। आफ्नो माथि केही चोट पटक छैन, यहीँ सल्फर पनि भेटियो भनेपछि त घटना सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा छ’, शनिबार बिहान ती प्रहरीले नेपालखबरसँग भने।
पोस्टमार्टम, फरेन्सिक परीक्षण र विस्तृत अनुसन्धानबाट थप प्रस्ट हुने भए पनि अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सुदीपले आमा-छोराको ह’त्या गरेर आफूले आ’त्मह’त्या गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ।
रक्सी, झ’गडा र ऋण
उनीहरुको घर बैंकले लिलाम गर्ने तयारी गरिरहेको आफन्तले बताएका छन्। यस विषयमा पनि प्रहरीले बुझिरहेको जनाएको छ। स्थानीय र आफन्तका अनुसार घर नै बैंकले लिलाम गर्ने तयारी गरेपछि घरमा झ’गडा बढ्दै थियो। दुई लाख रुपैयाँ ससुरालबाट लिएको ऋण पनि तिरेका थिएनन्।
सुदीप घरको काम नगर्ने रक्सी खाने, तास खेल्ने र खाली बाहिरै हिँड्ने गरेको र त्यही कारण घरमा झ’गडा भइरहन्थ्यो।झ’गडा हुँदा आमा-छोरा एकातिर र सुदीप अर्कोतर्फ हुन्थे।
सुदीपका भाइले भनेका छन्, ‘छोरो पढाउनु पर्ने, किन लत्तो छाडेको, काम गर्नु भनेर भाउजूले सधैँ कराइरहनु हुन्थ्यो।’
ससुरालीको २ लाख ऋणको विषयमा पनि उनीहरुबीच झ’गडा पथ्र्यो। यिनै कारण झ’गडा बढ्दै गएको र परिवार नै सखाप हुने अवस्थामा पुगेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। उजिर कार्की/नेपालखबर
‘छोरा सुशान्तलाई ‘रामराम’ लेखिएको कपडा ओढाइएको थियो’
भक्तपुरमा ३ जनाको श’व भेटिएको प्रकरणमा ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
शुक्रवार बेलुका भक्तपुरको थिमि नगरपालिका–६ दुवाकोट केएमसी अस्पताल नजिकैको एक घरमा श्रीमान्, श्रीमती र छोरासहित ३ जनाको श’व फेला परेको थियो भने घरमा पालिएको बेलायती कुकुर पनि मृ’त अवस्थामा फेला परेको थियो ।
घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारीका अनुसार घटनास्थल हेर्दा केही शं’कास्पद देखिएको छ । सुदिप अधिकारीको श’व’ केही ताजा देखिनु र श्रीमती सम्झना र छोरा सुशान्तको श’व सडे’को अवस्थामा देखिनुले सुदिपले ह’त्या गरेर आफूले आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
‘घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा श्रीमती र छोराको ह’त्या गरेर आ’त्महत्या गरेको हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ,’ती प्रहरी अधिकारीले भने,‘थप कुरा भने पोष्टमार्टम र फरेन्सिक ल्याबको अनुसन्धानपछि देखिएला ।’
सम्झना र छोरा सुशान्त तल्लो तलाको आ–आफ्नो कोठाको सुत्ने खाटामा कुहिएको अवस्थामा थिए । सुदिप भने माथिल्लो तलमा कम्भटमा वान्ता गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए । रगत र अन्य केही तरल पदार्थ सुकेको अवस्थामा भेटिएको छ । सानो बेलायती कुकुर पनि म’रेको अवस्था देखिएकाले सुदिपले ह’त्या गरेर आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अर्को पाटो छोरा सुशान्तको श’व’को माथि ‘रामराम’ लेखेको पहेँलो पिताम्बर कपडा (कात्रो) राखिएको थियो भने श्रीमती सम्झनाको श’वमा सेतो बुट्टा भएको कपडा (कात्रो) ओढाइदिएको अवस्था थियो । दुवै जनाको टाउकोको खप्परमा गहिरो चो’ट देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताए ।
‘छोराको श’वमा रामराम लेखिएको र श्रीमतीको श’वमा सेतो बुट्टा भएको कपडा ओढाएको अवस्था र आफूले भने कम्भोटमा वान्ता गरेका अवस्थामा श’व भेटिएको थियो,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
घटनास्थलबाट प्रहरीले ३६ वर्षीय सुदिप अधिकारी, ३४ वर्षीया सम्झना अधिकारी, छोरा सुशान्त अधिकारी र बेलायती कुकुरसहित घटनास्थलमा भेटिएका वस्तुहरुलाई नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणको लागि पठाइएको महानगरीय अप’राध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाले बताए ।
‘हामीले ३ जनाको श’व, कुकुरको श’व र घटनास्थलमा भेटिएका वस्तुहरुलाई फरेन्सिक ल्याब पठाएका छौ,’ प्रमुख थापाले लोकान्तरसँग भने ।
३ जनाको पोष्टमार्टम र फरेन्सिक ल्याबको अनुसन्धानपछि घटनाका अन्य पाटाहरू खुल्ने एसएसपी थापाले बताए । घटनास्थलको छानबिनका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विज्ञको टोली गएको थियो ।
शुक्रवार साँझ ५ बजे सुदिप अधिकारीका भाइ सुनीलले प्रहरीलाई खबर गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र महानगरीय अ’पराध महाशाखाको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । गगन अर्याल/लोकान्तरबाट
असोज ६ काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने ६४७ जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौंका ५० वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका ५११, भक्तपुरका ६३ र ललितपुरका ७३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो २४ […]
नेपालमै बन्छ कुखुरामा रोग लगाउने एक प्रजातिको ‘कोरोनाभाइरस’ विरुद्ध खोप
भदौ २०, काठमाडौँ । अहिले विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू मानिसलाई सङ्क्रमण गर्ने कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप बनाउने होडबाजीमा लागेका छन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ? कुखुरामा पनि एकखाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुन्छ। र, त्यसले निम्त्याउने रोगको नाम हो – एभियन् इन्फेक्शस् ब्रोङ्काइटिस् अर्थात् आईभी। यद्यपि त्यसबाट मानिसले डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि पशु चिकित्सकका अनुसार उक्त रोग कुखुराबाट मान्छेमा सर्दैन […]